Wiilkaan waxaa garaacay cunsuriyiinta! | Somaliska
Wiilkaan sawirkiisa aad ku aragtaan bogga waxaa lagu magacaabo Yusupha Sallah waxa uu ku noolyahay magaalada Malmö. Isbuucaan ayaa waxaa weerar ku qaaday dhowr qof oo cunsuriyiin ah kuwaasoo garaacay isaga iyo wiilyar oo uu dhalay oo 1 sano iyo bar jira. Ka dib markii ay garaaceen ayay ugu hanjabeen in ay buundada ka tuurayaan wiilkiisa.
Arinta ku dhacday wiilkaan oo ah mid naxdin leh ayaa waxay muujinaysaa heerka ay marayso cunsuriyada ka dhanka ah soo galootiga. Yusuf ayaa sheegay in markii ay garaacayeen ay sidoo kale aflagaado ugu dareen ku wajahan dadka madowga ah. “Waligay isma dhihin arintaan oo kale ayaa ka dhacaysa Sweden” ayuu warbaahinta u sheegay Yusuf Sallah.
asc dhamaan asxaabta iyo maamulka somaliska waan ka xumahay wlh in wadankaan ay cunsurinimo ka bilaabato sorry wlh ilaahay ha caafiyo kan la dilayna lkn ma sheegin jimcaale wadanka uu u dhashay akiid waa african sidaan u dareemay si kastaba ha ahaatee annaga soamli hadaan nahay saamayn ayay nagu yeelanaysaa ilaahow naga samata bixi
Mycket broblem som stor i Sverige.
asc dhamaan asxaabta iyo maamulka somaliska waan wax dhaco waxaaaa oo kale waayo dal aaa dalkaga eheeeen dareee ku joog waaaye ishal waxaaaa rajeeea dal keeeni oo nabad ah waaa wax laga xumaaado waxaaaan oo kale
September 11, 2013 at 23:35
Waa iskacaadi lkn waxaan aminsanahay cunsuriyinta wadankaan ayay ceebeynayaan lkn inta wanaagsan aa kabadan dadaala asxaabey
ilaah ha caafiyo maskiinkan dhibka soo gaaray dhulaadan laheeyn dareen ku joog waaye ! waa dhib kajira sverige awal waxaa leeygu cunsuriyay jalbaabka aan wato iyo magaca maxamed eey taagneeyd ! maanta sidaan ayeey mareeysaa dhibka kor ayuu usocdaa ilaah hanaga qabto
manta waxa ki dhimatay gotbeg gabar somaliyed ala ha u naxariisto aaad ban uga murugoday gabadhan waxay haysataa 2 cunug mid 8bil jiro waxa isoo gartay inaa nindeda jogin loona diiday fadlan qofkii warka haya ama jomcale hasoqoro arintan dhibta xun oo aya sweden kuhayso dadka somaliyed
waaan kaxumahay nin kaas sida loo galay waa arin laga xumaado ree swedanow allaha idin gargaaro ee iscaawiya hadiikale qabyaalad iyo wax aan loo baahnayn carada lataagnaada waana salaamantiihij
marka hore waaan salaamantahiin dhamaantiin salaaan kadib waan arakay sawrkan nacadninta badan waa mid innga iyo inta madawba ina sugaysaa oo aan kaawah u saar. Hadaba wadankan oo ay shaqo la,aani ka jirto in ay unsurydi inoogu darstana ka sii daran. waxaanad moodaba kwa uugu horryaa in say somaali yahiin. markaa ilaaahy ha inoo sahalo
ilahy ha usahlo wiilkas wa arin foolxun arintii 2sano yaa kawarhayo
Inta xun marwalbo inta wanaagsan ee aadka uga badan haloo eego allah ha caafiyo ninka dhalinyaradaa